Mampiahiahy : jerem-potsiny ny trondro eny an-tsena | NewsMada
Mampiahiahy : jerem-potsiny ny trondro eny an-tsena
Mitobaka eny an-tsena ny trondro tato anatin’ny roa andro izao. Mahatsapa anefa ireo mpivaro-trondro fa lo am-pitoerana fotsiny ny entana fa tsy sahy mividy ny olona na dia atao mora aza ny vidiny.
Efa mahatratra 12.000 Ar ny kilaon’ny trondron-dranomamy. Tafidina hatrany amin’ny 5.000 Ar anefa izany eny an-tsena noho ny fitobahan’ny trondron’Ikopa tampoka. Vaventy ny trondro ary tsy misy hanavahana azy amin’ny trondro hafa saingy tsy misy sahy mividy ny olona fa mijerijery fotsiny.
Hatramin’ny amalona vaventy mirentirenty eny an-tsena azon’ny olona tao amin’ny ranon’Ikopa. Amidy mora izy ireny ka na 3000 Ar aza dia mahazo.
Mahatsiaro ho voa mafy ireo olona efa tena mivelona amin’ny fivarotana trondro isan’andro sy ireo maka trondro any Itasy manoloana ity fitobahan’ny trondron’Ikopa tampoka mampiahiahy ny mponin’Antananarivo ity.
Ny hotely sasany nanapa-kevitra ny tsy hanao laoka trondro mihitsy aloha mandra-pilamin’ny raharaha. Ny sasany kosa miezaka manome fahafaham-po ireo mpankafy laoka trondro ihany ary mividy eny amin’ireo mpivarotra azo antoka efa mahazatra azy.
Raha ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Jono, sempotra noho ny antony tsy mbola voafaritra tsara ireo trondro mitsingevana ireo. Anisan’ny antony ny faharitran’ny rano araka ny fanazavana. Hatramin’izao, tsy mbola nisy ny olona heno ho narary nihinana ireny trondro ireny.
Mitarazoka hatrany ny valin’ny fitiliana hatao rehefa misy trangan-javatra hanaovana izany. Manamarina izany ireny aretina pesta izay niandry fanadihadiana sy fitiliana andro maro ireny. Efa ho herinandro vao nambara fa tena pesta no mitranga. Midika izany fa mbola votsa fiasa ny sehatra fanaovana fitiliana eto Madagasikara.